Erag: waa la sugayaa ammaanka ergooyinka | Gedoonline
Erag: waa la sugayaa ammaanka ergooyinka	Added by Editor on July 22, 2012.Saved under Latest News	MUQDISHO(GMN)-Khaliif Axmed Erag oo ah Taliyaha Ciidamadda Nabad sugidda Soomaaliya ayaa shaaciyey in ciidamo gaar ah ay dhigi doonan hoolka lagu wado in lagu qabto shirla ergooyinka dastuurka meel marinya
Khaliif ayaa sheegay in gacan bir ah ay ku qaban doonaan ammaanka iskuul baaliyo oo ah halka loo qorsheyey in shirka lagu qabto.
Taliyaha Nabad sugidda ayaa sheegay in ciidamo gaar ah oo ka mid ah kuwa nabad sugidda ay dhigi doonaan halka shirka lagu qaban doono.
Hay’adda ayaa talaabadani waxa ay ku micneysay inay tahay mid ay ku sugayaan ammaanka ergooyinka meel marinaya dastuurka.
Ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugida ayaa lagu arkayaa hareeraha iskuulbulisiyo oo ah halka lagu wado inuu ka dhaco shiirka ergooyinka.
Saxiixiyaasha Road-Mape oo Saameyn ku yeeshay Ergooyinka
Puntland oo soo xushay ergooyinka dastuurka
Faroolle iyo Mahiiga oo ka hadlay ergooyinka Puntland
Xubno ka mid ah Golaha Ammaanka ee QM oo maanta gaaray Muqdisho.
Fiqi: hala sugo ammaanka Muqdisho